Muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la shaqeeya 'iPod-ka cusub' ayaa imaan doona WWDC 2022 | Waxaan ka socdaa mac
Muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la shaqeeya 'iPod-ka cusub' ayaa imaan doona WWDC 2022
Xanta cusub, in kasta oo aan si fiican loo aasaasin wuxuu ka digayaa in muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la shaqeeya 'iPod-ka cusub' ay imaan doonaan WWDC 2022. Xantaas ayaa ah mid shaki la gelinayo maxaa yeelay waxay ka timid ilo shaki badan. Xitaa sidaa oo ay tahay, kama saari karno maxaa yeelay marna ma ogaan kartid waxaana ka wanaagsan inaad ka taxaddarto kan caqliga badan. Macluumaadka ayaa soo jeedinaya in aaladda ugu horreysa ee dhabta ah ee dhabta ah ee Apple ay ka soo muuqan doonto WWDC sanadka 2022 waxaana si adag loogu dhex dari karaa "iPod cusub".
Xanta waxaa bilaabay Robert Scoble, iyada oo loo marayo akoonkiisa barta bulshada ee Twitter. Wuxuu sheegay inuu ka bartay aaladda xaqiiqda dhabta ah ee ka timaada Apple taas oo ka soo muuqan doonta shirweynaha shirkadda horumarinta adduunka ee sanadka 2022. Wuxuuna intaas ku daray in sababta ay Apple u sii deyn doonto xagaaga ay tahay "iPod cusubi waxay noqon laheyd heshiis weyn Kirismaska. Waxa uu sheegay in Ipod-ku uu keeni doono "khibrado badan ... aaladaha dhegaha la gashado," isagoo raaciyay inay wada shaqeyn doonaan. Scoble ma lahan rikoor adag oo rikoor ah marka ay timaado xanta Apple. 2017, tusaale ahaan, waxay si khaldan u saadaalisay in Apple soo bandhigi doono labo muraayadood oo dhab ah oo la kordhiyay iyadoo lala kaashanayo Carl Zeiss sanadkaas.
Ku saabsan Apple headset-ka Apple:
Kaliya waxaan bartay waxay ka bilaabi doontaa WWDC sanadka soo socda maxaa yeelay iPod-ka cusub wuxuu noqon doonaa heshiis weyn Kirismaska.
IPod-ka wuxuu soo bandhigayaa khibrado badan oo aad si buuxda uga dareemi doonto Kirismaska ​​sanadka 2022-ka ee maqalka aadna ka rajeynayso inay wada shaqeeyaan.
- Wareega (@Scobleizer) July 15, 2021
Weli, xanta jiritaanka muraayadaha dhabta ah ee muraayadaha ayaa soo jiray muddo dheer. Sidaa darteed, sidaan horay u sheegnay, ma awoodno oo ma tuuri karno macluumaad kasta oo laga sii daayay mowduucaan, laakiin waxaan ka digi karnaa ama ugu yaraan ka digi karnaa muhiimadda yar ee ay yeelan karto maxaa yeelay waxay ka timaaddaa halka ay ka timaado. Sida had iyo jeer ku dhacdo xanta, waa inaan sugnaa oo aan eegnaa bal inay run noqdaan iyo in kale ama ugu yaraan sug inaad eegto haddii macluumaad cusub ay sii socdaan oo soo baxa oo niyad jabinaya. Ma jiraan wax badan oo haray oo la sugayo oo haddii aysan run ahayn dhowaan waxaan arki doonnaa caddeyn na tusaysa inaannaan arki doonin wax la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la shaqeeya 'iPod-ka cusub' ayaa imaan doona WWDC 2022
Kuwani waa dhammaantood Isboortiga Loop Straps International Collection oo fiidiyoow ah
Dukaammada Apple qaarkood waxay u labistaan ​​ciyaaraha Olimbikada iyagoo sharfaya cayaaraha ay ciyaaraan